Wax taaj oo kale oo lagu durayo Balaastik ah oo leh Mashiinka Kuleylka Induction
Wax taaj oo kale duray caag ah oo leh kululaynta induction waxay u baahan tahay horay-u-kululaynta wasakhahaasi heer kulka sare, si loo hubiyo socodka saxda ah ama daaweynta waxyaabaha la duray ee la isku duro. Hababka kululaynta ee caadiga ah ee loo adeegsado warshadaha waa uumi ama kululayn diidmo leh, laakiin waa kuwo qasan, aan shaqeyneyn, oo aan la isku halleyn karin. Kuleylka kuleylintu waa bedel nadiif ah, dhakhso leh oo tamar-ku-ool ah kaas oo si ballaaran loo isticmaalay sannadihii la soo dhaafay si loogu beddelo uumiga, gaaska ama kululaynta diidmada wasakhda iyo dhimashadu.
Waa maxay Wax taaj oo kale oo duritaanka?
Mashiinka cirbadeynta caaga ah ee kuleylka kuleylka ayaa ah habka dhalaalida caleemaha balaastigga ah (thermosetting / thermoplastic polymers) oo mar uun la kari karo, lagu durayo cadaadis godka caaryada, kaas oo buuxiya oo xoojinaya soo saarida badeecada ugu dambeysa.
Sidee Ayuu U shaqeeyaa Wax taaj oo kale duritaanka Balaastik?
Nidaamka wax lagu duro ee balaastigga ah ee Protolabs waa nidaam caadi ah oo ku lug leh caaryada aluminium. Aluminium wuxuu ku wareejiyaa kuleylka si ka waxtar badan kan birta, sidaa darteed uma baahna kanaalada qaboojinta - taas oo macnaheedu yahay waqtiga aan ku badbaadinayno qaboojinta ayaa lagu dabaqi karaa kormeerka cadaadiska buuxinta, welwelka qurxinta iyo soo saarista qayb tayo leh.
Fiilooyinka xabagta waxaa lagu raraa foosto halkaas oo ugu dambeyntii lagu dhalaali doono, la cadaadin doono, laguna durayo nidaamka orodka mould. Cusbi kulul ayaa lagu toogtay daloolkii caaryada ee irridaha qaybtiina waa la shubay. Biinanka Ejector wuxuu fududeeyaa ka saarista qaybta caaryada meesha ay ku dhacdo weelka wax lagu raro. Markuu orodku dhammaado, qaybo (ama tijaabada hore ee tijaabada ah) ayaa la garaacayaa oo la raraa wax yar kadib.
Sidee Kuleylka Induction loogu adeegsadaa Warshadaha Dhimashada & Caaryada?
Induction Preheating of qalabka iyo wasakhda loogu talagalay wax ka sameynta caag balaastig ah
Kuleylka qalabka wax lagu duubo ee lagu daaweynayo sheyga caagga ah iyo taayirrada gawaarida
Kuleylka kuleylka kuleylka ee tuubada tuubada iyo soo saarida alaabada caafimaadka
Dhimo iyo kuleyliyaha jilicsan ee shaabadda birta iyo sameynta
Kuleylka kuleylka ee wasakhda wax lagu shubay ee warshadaynta birta
Kuleylka kuleylka daaweynta iyo adkeynta qalabka shaabadda iyo feedhka oo dhinta
Categories Soojiidashada kululaynta PDF, Technologies Tags Wax taaj oo kale duritaanka caaga IH, induction wax taaj oo kale duray, Wax taaj oo kale oo duritaanka ah, kululeeyaha wax taaj oo kale duray induction, Wax taaj oo kale duritaanka Caaga ah, Cirbadaha mudista, Caagagga Balaastigga ah, Caagagga Balaastigga ah, Duritaanka Caaga wax taaj oo kale kululeeyaha, Caagada caag ah ee caag ah, Nidaamka wax taaj oo kale ee duritaanka caaga ah, Waa maxay Wax taaj oo kale oo duro Post navigation